बालिकाले आफ्नी आमालाई पे’ट दु’खेको बताएपछि अस्पतालमा हेर्दा जे देखिन..सबैको होस उडायो !!! – News Nepali Dainik
बालिकाले आफ्नी आमालाई पे’ट दु’खेको बताएपछि अस्पतालमा हेर्दा जे देखिन..सबैको होस उडायो !!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ०५, २०७७ समय: ८:२५:५२
आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत ११ वर्षकी बालिकालाई विद्यालयका प्रधानअध्यापकले नै गलत कर्म गरेको खुलेको छ ।यो घटना भारतको हो । त्यस्तो काम गर्ने प्रधानअध्यापकलाई जन्म कैदको सजाय घोषणा गरिएको छ भारतीय मिडियाले प्रधानअध्यापकलाई सुनाइएको स जा यका बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।
भारतको बिहार राज्यको राजधानी पट्नामा रहेको विद्यालयमा कक्षा पाँचमा पढ्ने बालिकामाथि प्रधानाध्यापक अरविन्द कुमारले गलत कर्म गरेका थिए।उनलाई त्यहाँको नागरिक अदालतले सजाय सुनाएको एनडीटीभीले जनाएको छ। यस घटनामा सहयोगीको भूमिका खेलेको पुष्टि भएपछि सोही विद्यालयका एक प्रशासनिक कर्मचारी अभिषेकलाई भने जन्म कै दको फै’सला सुनाइएको छफाइल तस्विरयो घटना झन्डै तीन वर्ष अगाडिको हो।
अदालतले जरिवाना स्वरुप प्रधानाध्यापकलाई एक लाख रुपैयाँ र अर्का कर्मचारीलाई ५० हजार पनि तिराएको छ। पटनाको फुलवारीसरिफ क्षेत्रको न्यु सेन्ट्रल पब्लिक स्कुलमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा यस घटना भएको थियो। बालिका ग र्भवती भएपछि मात्र घटना सार्वजनिक भएको थियो।बालिकाले आफ्नी आमालाई पे’ट दु’खेको बताएपछि अस्पतालमा उनी गर्भवती भएको पत्ता लागेको थियो। त्यसपछि बालिकाले प्रधानाध्यापकले उनको कक्षमै आफूमाथि घटना भएको बताएकी थिइन् । एजेन्सी
Last Updated on: February 17th, 2021 at 8:25 am